Banyere Anyị - Guangzhou Danye Optical CO., LTD
Guangzhou Danye Optical CO., LTD e hiwere na 2010, emi odude ke Guangzhou China, bụ ọkachamara elu àgwà nke na-abụghị nke ogwugwo mma na ọgwụ na ahụ ike emeputa na ekspootu. Ulo oru anyi sitere na nyocha mbu, mmepe, mmeputa, ahia mba na ire ahia, mgbe oru ruru oru ndi okacha amara;
Danye nwere ndị ọrụ ọrụ nwere ahụmahụ, na ndị ahịa anyị, ndị ọrụ aka ọrụ, ndị ọrụ mmepụta nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe nke ụlọ ọrụ mara mma, yabụ anyị nwere ike ịnye ngwọta zuru oke site na ngwanrọ, ngwaike, imepụta ahụ, nhazi usoro maka ndị ahịa ahaziri OEM, ODM ọrụ ma ọ bụ chọọ ụdị azụmahịa ọ bụla;
Ngwaọrụ anyị gụnyere 808nm diode laser maka iwepụ ntutu, RF thermagic maka iweli ihu na mgbatị, teknụzụ ọhụụ 6.78Mhz monopolar RF skin lifting & wrinkle removal machine, 360 cryolipolysis platform for body slimming and lifting, CO2 fractional laser for skin resurfacing and vaginal therapy, diode laser na q mgba ọkụ laser 2 na 1 maka ntutu ntutu na egbugbu egbugbu, IPL / Elight OPT SHR maka ime ka anụ ahụ dị ọhụrụ, Q ịgbanwee laser maka iwepụ egbugbu, Igwe ikuku ikuku maka ikpuchi anụ ahụ, ngwaọrụ multifunctional maka idozi nsogbu akpụkpọ ahụ dị iche iche, usoro HIFU na ya na;
Igwe anyị bụ CE, patent, ROHS mma, na Danye bụ SGS na TUV audited soplaya, anyị nwere afọ 11 nke mba mbupụ azụmahịa, igwe na-ewu ewu na mba dị iche iche nke ụwa. Anyị bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Anyị na-enye ọmarịcha ọrụ ahịa ahịa. Ngwaọrụ na-enweta ikike dị ogologo oge yana nkwado teknụzụ oge ndụ. Gụnyere ma ọnweghị oke na ọrụ ndị a.
1. Ntuziaka onye ọrụ
2. 24-awa nkwado online
3. Free akụkụ
4. Nkwado nkwado vidiyo
N’okporo ụzọ mara mma, anyị na-arapara mgbe niile na ụkpụrụ nke “ogo mbụ, ọrụ izizi”, ma na-emeziwanye ma na-agbanwe ngwa ngwa iji zute ndị ahịa!
Ọ bụrụ na ị masịrị anyị, biko sonyere anyị, Danye ji ezi obi na-atụ anya ịmepe ọmarịcha ịma mma ga-adị mma n'ọdịnihu.